Rodobe 23 sept : diso paika izay mitady fifandonana eto Madagasikara !
N'inona n'inona ataon'ialahy, dia resy ialahy hoy Ramatoa Fanja mpitarika ny tanora Tim. Nanao fampanantenana poak'aty hoy izy, Rajoelina teny amin'ny kianjan'ny 13 May, toy ny vary mora sy ny menaka mora. Ny fifidianana ihany koa dia natao dokambarotra amin'ny fahitalavitra, fa hoe hanao fifidianana ben'ny tanana. Hatramin'izao anefa ireny hoy izy, dia tsy tanteraka akory. Ny zavatra vitan'ny Rajoelina teto hoy Ramatoa Fanja dia ny fandrobana sy famonoana olona. Mikasika ny fisamborana ny Filoha Ravalomanana dia nilaza ny tenany, fa tsy misy lalam-panorenana eto afaka mitsara azy, ary tsy nanao heloka ny Filoha Ravalomanana. Mahatsapa izahay, tanora Tim hoy izy, fa izy ihany no afaka mampandroso ny firenena, noho izany dia tohananay hatramin'ny farany.
Mahagaga hoy kosa ny solontenan'ny Moramanga, fa olona niaraka nanao sonia anao izao dia sahinao ny manome didy fampisamborana azy. Olona manana mauvaise foi hoy izy ny manao izany.Raha tena demokratika marina i Camille Vital hoy ny solontenan'i Moramanga dia mametra fialana, fa tsy andrasana ho trongisina eo. Mikasika ny fanambaran'ny Pr Zafy dia nambarany fa zon'ny tanteraka no manao ireny. Raha misy aminareo hoy izy, no mahatsiaro tena fa tafiditra tao anatin'ireny ny anaranareo dia manaova fanambarana amin'ny gazety, fa hoe manala baraka anay ny Pr Zafy. Herinandro no fe-potoana omenay anareo hanaovanareo izany.